Chilli waa mid ka mid ah badeecadaha beerah - Jual Website Iklan Baris Siap Pakai ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
Chilli waa mid ka mid ah badeecadaha beerah
Chilli waa mid ka mid ah badeecadaha beeraha kuwaas oo qiimaha wey isbed bedashaa ballaaran . Gaar ahaan maalmood weyn sida Ciida ka hor , xaqiiqadii la diidey in suugo basbaas . Waa in dadka Cusbitalka ay u aasituDomino.com JUDI DOMINO, AGEN DOMINO, AGEN JUDI DOMINO ONLINE INDONESIA TERPERCAYA
aan karri , sidoo kale for sale ama si fudud waayo Tirin u gaar ah . Nasiib darro , waayo kuwa ku nool helitaanka reer magaalka ah ee dalka layaal waa mid aad u kooban . Laakiin waxa taas loo circumvented karaa by karri sii kordhaya oo dheryay ku ah ama polybags .
Sida loo koraan karri oo dheryay ku ah ama polybags si caddaalad ah ay fududahay in la sameeyo . Karri Xeebeedka la samayn karaa ama in ka da'a dhulka iyo dhulka hoose . Guud ahaan , karri beerto waxaa la samayn karaa at sare ah 0-2000 mitir heerka badda . Heerkulka fiicnayn , waayo dhirta chilli waa in duwan ee 24 - 27oC , laakiin weli u adkeysan karaan heerkulka waxa uu ka weyn . Guryaha waxay ku xiran tahay nooca noocyo chilli .
Hal nooc oo suugo basbaas in ku haboon yahay beerto beerta waxaa la kerting suugo basbaas . Noocyada Tani waa yara more adkaysi u cimilada ee kulaylaha ah iyo dhadhan basbaas badan doorbiday in suuqa . Halkan waxaan ku tilmaami oo ku saabsan sida ay u koraan buracdda chilli in polybag .Selection of farcankiisii
In suuqa noocyo badan oo kala duwan oo ah in kabadan hal chilli , laga bilaabo hybrid si kala duwan ee degaanka . Sida loo koraan suugo basbaas degaanka iyo hybrid ma laha farqiga u muhiim ah . Waxa kaliya Beelaha chilli qaar ka mid ah alaabta lagu taliyey in laguula dhaqmo daawooyinka qaarkood . Noocyo badan oo hybrid laga keeno Taiwan iyo Thailand , halka noocyo badan oo degaanka ah koray ee ka ambabixi doonaan , Quduuska ah , si ay Tanah Karo , North Sumatra .
Hadda waxa ka jira natiijada doorashada kala duwan ee degaanka , wax soo saarka waa ka wanaagsan yahay noocyo maxalliga ah iyaEyangtogel.com Togel Singapura | Togel China | Togel Sydney | Togel Cambodia da oo aan xulasho . Abuurkii waxaa lagu gadaa daasadaha Falooyinka soo saaray Sang Hyang Sri . Marka laga eego dhinaca farsamada , sidii ay u koraan karri AB maxaliga ah ka fudud iyo lidka ku adag sida loo beero suugo basbaas hybrid . Kondidi suugo basbaas Local more kabixinaysa deegaanka ka badan suugo basbaas hybrid . Waxa kaliya wax soo saarka in weli uu ka yar yahay hybrid ah .Seeding
Sida loo koraan karri in polybags inaan la samayn toos ah uga abuur ama iniinyo . First of tahay iniinaha oo dhan , waa in marka hore loo beeray basbaas . Habka seeding The DOORASH abuur dhibic koritaanka , oo kala qaybiya abuur ah in koraan faaqidaad , aabihiina ama buka . Intaa waxaa dheer , diyaar ah in ay sugaan illaa geedo xad adkaysi u beerayo meel weyn .
Nursery Polybag waxay noqon kartaa size yar ( 8 × 9 cm ) , caleen muuska , saxan ballaaran ( saxaarad ) xannaanada carruurta , ama dhul of dalka . Si aad u aragto faahfaahin dheeraad ah fadlan akhri sida ay u abuuraan ahaynba warbaahinta a . Habka ugu dhaqaalo badan yahay si ay u diyaariso goob ka mid ah dalka for media xannaanada carruurta .
Create an goob ka mid ah dalka ay la size ku filan , qaso compost oo ciid iyo walaaq ilaa inta xumeyd . Ciid Dhagax la sameeyo sida siman ah si aanay xididada si fudud geli karin . Create an oo dhumucdiisuna waxay baa'bin karta of 5-10 cm , qunfuleysaa it on for masaafo of 10 cm .
Geli abuurka chilli in bool oo la fogaan ah 7.5 cm , kadibna aad raaciso in aad qoysid ciidda iyo daboolaa ash ama carro . Ka dib markii in , daboolaa kiishash dhasku qoyan for 3-4 maalmood , hayn in ay weli kiishash dhasku qoyan . Maalinta 4 abuur ah doontaa dhulka , ka dibna la furo arabikhi dhasku ka . Baa'bin karta waxAfatogel.com Bandar Terbesar Situs Togel Online Terpercaya a habboon in ditudungi leh muuq- si geedo dhalinyarada chilli ka soo kulayl iyo qubeyska roob si toos ah loo ilaaliyo . Dhirta Chilli ayaa diyaar u ah in la soo wareejiyey oo keenay polybag weyn ka dambeeya da'da 3-4 todobaad , ama warshad hore u leedahay 3-4 caleemo .Diyaarinta warbaahinta kordhaya
Dooro polybag size kor ku xusan 30 cm ah , si ay dhexdhexaad ah beeritaanka xoog leh oo ku filan si ay u taageeraan koritaanka dhirta suugo basbaas xaqse . Polybag ka sokow , waxaa kaloo loo isticmaali karaa nooc ka mid ah dheriyo caag ah , koolo , ciid , ama dhoobada . Ama waxaad kaloo isticmaali kartaa weelasha labaad in isticmaali karin cidkale , gelin godad ku yaala xagga hoose ee weelka -duna .
Sida loo koraan karri in polybag ah u isticmaali kara dhexdhexaad ah lagu beero ka soo dar ah ee ciidda , compost , digada , arabikhi oo bariis ah , arabikhi oo bariis ah , iyo kuwa kale . Fadlan akhri sida ay u abuuraan dhexdhexaad ah lagu beero Wixii faahfaahin dheeraad ah .
Tusaalooyinka qaarkood waxaa ka mid ah ka kooban warbaahinta kordhaysa ( 1 ) carrada lagu qaso compost leh 2:1 ; halabuurka ah , (2) carrada qaso, digada xoolaha , iyo arabikhi oo bariis ah ula 1:1:1 halabuurka qoraalka , ama (3) lsku ee ciidda uskag leh 2:1 halabuurka . Haddii la isticmaalayo digada , waa in aad ka dooran bacrimin aituBola.com JUDI BOLA, AGEN BOLA, AGEN JUDI BOLA PIALA DUNIA h in uu leeyahay qaan . Eeg nooca iyo sifooyinka of meeshii digada, .
Create an dhexdhexaad ah lagu beero sida siman sida ugu macquulsan by haadiyo . Isku qas ku saabsan 3 qaado oo Asili in polybag kasta . Walaaq ilaa iyo uu yahay gebi ahaan xumeyd . Qorigiisii ​​polybag gudihiisa leh fiber qumbaha , jajabkii xabbad leben , ama jajabkii Styrofoam.ka . Sidaas Tilmaan biyaha in uusan inundate dhirta xididka aagga .